देशको नाम कहलाउने एक खेलाडी तथा प्रशिक्षक अनाथ बालबालिकाको पनि साहारा बन्दै - Gokarna News from Nepal
देशको नाम कहलाउने एक खेलाडी तथा प्रशिक्षक अनाथ बालबालिकाको पनि साहारा बन्दै
शुक्रबार, असोज ०३, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं –हरेक मानिसका फरक फरक इच्चा आकांक्षा र सपनाहरु हुन्छन । आफ्ना इच्छा आकांक्षा र सपना पुरा गर्ने दौडमा जो कोही आफ्नै गतीमा दौडिरहेको हुन्छ । कोहीका सपना पुरा हुन्छन त कोहीको नहुन पनि सक्लान । त्यो व्यक्ति र उसले गर्ने कर्ममा भर पर्छ । हाम्रो नेपाली समाज त्यस्तो परिवेश र परिस्थीतीबाट गुज्रिदै आएको छ , जहाँ कसैले केही काम गर्छ भने उसलाई कसरी खुट्टा तान्ने र उसलाई लडाउने भन्ने प्रवृती पछिल्लो समय हावी हुँदै आएको छ । तर त्यस्ता मानिसको व्यवहार र सोचलाई वेवास्ता गर्दै मानिसले आफ्नो बाटोमा इमान्दारपूर्वक लाग्छ भने त्यो मानिसले सफलताको उचाई चुम्न सक्छ भन्नेमा दुईमत छैन । मानिसले गरे के हुन्न भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पेश गर्दै सफलताको श्रेणीमा पाईला टेक्ने युवा जमात पनि उत्तीकै छ । आफ्ना सपना पुरा गर्न मानिसमा दृढ इच्छा शक्ति र लगनसिलतानै प्रमुख आयाम हो । हामी नेपालीहरुमा क्षमता दक्षता नभएको होईन् ।हाम्रा नेपाली युवाहरुले विभिन्न क्षेत्रमा विश्व समुदायसामु देशको शिर ठाडो राख्ने काम गरेका छन् ।देशको परिचयलाई विश्वसामु पु¥याउने गरेका छन् । नेपाली समाजमा खेललाई तेती धेरै प्रोत्साहन दिएको पाईदैन । खेल क्षेत्रको लागी भन्दै अरबौं बजेट तर्जुमा गरिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा त्यो बजेट कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छ । त्यसको जानकारी नागरीकहरुलाई त छैनन् नै खेल पे्रमी खेलाडीहरुलाई समेत थाहाँ हुँदैन । अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो सरकारले खेलाडी एव्म खेल क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई त्यस्तो कुनै सुविधा र सम्मान दिन सकेको छैन । खेल क्षेत्रमै भविष्य बनाउ भन्ने युवाहरु कमै मात्रामा देखा पर्नुपर्ने स्थीती छ । त्यसको प्रमुख कारण भनेकै सरकारले खेलक्षेत्रमा चासो नदिनु नै हो । खेलकुद मन्त्रालयनै छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ तर खेलाडी र खेलक्षेत्रको अवस्था भने नाजुक छ । सरकारले खेलक्षेत्रमा गरेको लगानी कहाँ गएको छ । यस्ता यावत कुराहरु छन् । एउटा खेलाडी देशको लागी खेल्छ । देशको नाम चम्काउँछ । केही समय विभिन्न संघ सस्था र सरकारले हेरेजस्तो गर्छ । तब उ कुनै कारणबाट कमजोर बन्न थाल्छ । विस्तारै सबैले विर्सदै जान्छन् ।त्यो खेलाडी आफ्नो रुममा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै जितेका मेडल र प्रमाण पत्र उसको भित्ताहरुमा देख्छ । तर हिजो देश र नेपालीको शिर ठाडो पार्न आफ्ना अमुल्य जीवन यसैमा समर्पीत गरेको त्यो खेलाडीलाई भोली के खाने कसरी परिवार पाल्ने भन्ने स्थीतीले पिरोल्छ । किनकी त्यस्ता खेलाडी जसले देशको नाम उच्चो पारे तिनै खेलाडीलाई समेत सरकारले देख्दैन । त्यो उनिहरुले गरेको त्यागलाई सम्झदैन । त्यो खेलाडीको मनमा चिसो पस्छ । देशको नाम कहालाउन गरेको कर्मलाई धिर्काछ । नयाँ आउने पिढीलाई पनि उसको कथा व्यथा थाहाँ हुन्छ । जुन खेलाडीको अवस्था नयाँ पिडिले देख्छ तब त्यो पिढि पनि खेल क्षेत्रमा जति सहभागी हुनुपर्ने हो तेती हुँदैन । भएपनि विकल्प खोज्दै अगाडी बढ्छ । एकातिर उसले आफ्नो पेट पाल्ने विल्कप रोजेको कार्य गर्छ सँगै खेल पनि । त्यसरी पर्याप्त मात्रामा उसले गर्नुपर्ने अभ्यास (प्राक्टिस) गर्न सक्दैन । अनी त्यस्तो खेलाडीले कसरी अन्य देशका सदावहार खेलमै लागेका प्रतियोगीसँग भिड्न सक्छ ? नेपाली खेल क्षेत्रको खस्कदो स्थीतीको कारक तत्व यो पनि एक हो । यस्तो अवस्थामा राम्रा प्रतिभावान खेलाडीहरु यस्तै कारणले हराएका छन् । खेलाडीहरुको अवस्थाबारे सरकार र सम्बन्धीत निकायलाई जानकार नभएका होईनन् तर यस्ता क्षेत्रमा पनि राजनीतीक भर्ती गर्ने नातावाद कृपावाद भईदिदा योग्य र सक्षम खेलाडी समेत पछि पर्ने स्थीतीहरु देखा परेका छन् । सरकारले गरेन भनेर आफुमा भएको प्रतिभा र क्षमतालाई लुकाउनु पक्कै पनि हुँदैन । त्यो क्षमता र प्र्रतिभाको कुनै न कुन रुपबाट एक दिन सम्बोधन हुन्छ । त्यस्तै आफ्नो इच्छा सपना पुरा गर्न अनेकन दुःख कष्ठ झेल्दै ति कष्ठको सामना गर्दै कहिले भोको पोटे,कहिले अनिद्रा यस्तै यस्तै दुःखको भुमरिबाट आफ्नो सपनालाई साकार पार्दै,राष्ट्र र नेपालीको नाम चिनाउँदै संघर्ष गर्दै सितोरिया कराँतेको एक अन्तराष्ट्रिय खेलाडी , अन्तराष्ट्रिय रेफ्री तथा प्रशिक्षक(एकेफ जज वी)का रुपमा परिचित भएका अजय लामा(सानुबाबु)को कथा
काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका –७ होक्से(साविक ५) मा बाबु रत्न बहादुर तामाङ र आमा ज्ञानीमाया तामाङको कोखबाट २०४० सालमा कान्छो छोराका रुपमा जन्म लिएका अजयले आजको दिन सम्म आईपुग्न अनेकन हन्डर र ठक्करलाई छिचोल्दै आज एसियन सितोरिया करातेका रेफ्री तथा प्रशिक्षका रुपमा आफ्नो नाम साथै देशको नाम चिनाईरहेका छन् । जनता मावी होक्सेबाट ०६२ सालमा एसएसलसी उर्तीण गरेका अजयले १२ सम्मको मात्र पढाई सकाएका छन् । उनी १२ सकाएपछि काठमाडौं छिरेका थिए । सानै उमेर देखी करातेको नशा उनमा चढेको थियो । उनलाई पढाई भन्दा पनि खेल क्षेत्रमै उनको ध्यान थियो । करिब ५ बर्षको उमेरमै उनी पाँचखाल डोजो हलबाटै कराते खेल्ने अवसर पाएका थिए । उनलाई यस क्षेत्रमा ल्याउन हौसला दिने साथै उनकोे पहिलो प्रशिक्षक एव्म गुरु झडक बहादुर दनुवार हुन । अजयले करिब १० बर्ष पछि ब्याल्क वेल्ट पाएका थिए । गाँउठाँउको सुविधा लगाएतका कारण पनि बेल्ट टेष्ट छिटो नगर्दा ब्याल्क बेल्ट भने खेल्न लागेको समयको अन्तरालमा ढिलो पाए । तर उनलाई करातेनै थियो भित्रै मनबाट खेल्छु र यसमा केही गर्छु भन्ने तिव्र भोक । त्यस समयमा जिल्लाभरका खेलाडीलाई भेलापारी बनेपामा ग्रेडिङ हुन्थ्यो । उनी त्यस्ता भाग्यमानी पनी यस कारण मानिन्छन् उनले प्राप्त गर्ने ग्रेडिङ वा भनौं ब्याल्क बेल्टको फष्ट दान थमाउने नेपालमा करातेको सुरुवात गराउने थानेश्वर राई हुन । भने उनलाई ब्याल्कबेल्टको हिस्सेदारी दिलाउने कार्यमा प्रशिक्षकको रुपमा राजेन्द्र कपालीले गरेका थिए । अजय(सानुबाबु)२००३ मा ब्याल्क बेल्टको हिस्सेदार भएका थिए । उनलाई करातेको भोक थियो ,त्यही भोक र करातेको हुटहुटीले उनलाई काठमाडौं तान्यो । काठमाडौं आएपछि नर्थ ब्रान्च शाखा डोजोहल बूढानिलकण्ठबाट सुरुवात गरे । जहाँ उनको गुरु प्रेमलाल बोमजन थिए । उनै बोमजनको परिक्षणबाटै आज अजय राष्ट्रिय हुँदै अन्तराष्ट्रिय खेलाडी, राष्ट्रिय एव्म अन्तराष्ट्रिय रेफ्री(एसिएन) तथा प्रशिक्षकका रुपमा पुगेका छन् । उनलाई दोस्रो दान देखी चौथो दान हात पार्न उनै प्रेमलालले प्रशिक्षित गराए ।
यो स्थान सम्म आईपुग्न अजय(सानुबाबु)ले अनेकन पिडा र दुःख झेले । घरबाट कसैको सपोर्ट थिएन काठमाडौं जान र त्यो बेलाको समय एसएसलसी सकायो काम गर्न विदेशीनु पर्ने जस्ता परिवेश त्यो समयमा थियो तर उनलाई विदेश जाने र धन कमाउने भन्दा पनि करातेबाटै आफ्नो सँगै देशको नाम उचो राख्ने र नेपाललाई विश्व समुदाय सम्म चिनाउने इच्छा थियो । तर घरको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकोले काठमाडौं छिरियो तर पेट कसरी पाल्ने र खेललाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने कुराले पिरोल्न थाल्यो । त्यसैक्रममा ट्याक्सी चलाउन सुरु गरे । ट्याक्सी चलाउँदै केही पैसा बचाउँदै करातेलाई पनि निरन्तरता दिदै गए । ट्याक्सी पछि काठमाडौं–गौर नाइट बस पनि चलाए । त्यसैसमय वरिपरि साउदी अरबमा एक खेल सेन्टरबाट प्रशिक्षको कामको अफर आयो करिब एक बर्ष त्यहाँ काम गरेपछि नेपाल फर्किय । पुनः खेल क्षेत्रमै लागे । नेपाल आएपछि यसै बस्दा उही पेट पाल्नु पर्ने बाध्यता । पहिले गरेको ड्राईभिङ क्षेत्र छाडेर ट्राभल एजेन्सीमा जागिर सुरुवात गरे । त्यहाँ पनि केही समय फेरी बसको स्टेरिङनै समाउनु प¥यो, जहाँ टुरिष्ट बस चलाउनु पथ्र्याे । त्यहाँ करिब २ बर्ष गरेपछि ,अर्को टा«भलमा मार्कटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्दै खेललाई पनि निरन्तरता दिदैं अगाडी बढे । ति जीवनका अनेकन संघर्षले उनलाई आज यो स्थानमा पु¥याएको छ ।
जसरी प्रधानमन्त्री,मन्त्री, राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरुलाई घर वंगला र कारमा पछि सम्म सयर गराउन सक्ने तर त्यही देशको नाम चिनाउने खेलाडी प्रशिक्षकहरुलाई पेट पाल्न समेत अफठ्यारो स्थीती आउनु पर्ने यो अवस्था अत्यान्तै दुख लाग्दो भएन र
लामाले क्षेत्रिय स्तरका धेरै खेलहरु खेलेका छन् । उनी मलेसियामा २०११ तिर एक अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेल खेलेका थिए, तर अफसोच उनी सेमीफाइनलबाट वाहिरिनु परेको थियो । अजयले सोचे अब खेल खेल्न पुग्यो, बरु नयाँ भाई बहिना नयाँ खेलाडी उत्पादन गरौं भन्ने सोच जाग्यो । आफुहरुले नपुगेको स्थानमा नयाँ पिढिका खेलाडी उत्पादन गरेर त्यो स्तरको बनाउँ भन्ने लाग्यो र प्रशिक्षकका रुपमा लागे । रेफ्रीको लागी गर्नुपर्ने मापदण्डहरु पुरा गरे ।राष्ट्रिय रेफ्रीको लागी सुरुवातमा जज वी लेभल प्राप्त गरे त्यो सँगै काम गर्दै जादाँ जज ए हुँदै २०१७ मा एसिएन रेफ्रीको स्थान हासिल गरे ।
उनी तेतीमा मात्र सिमित रहेनन् उनको आफ्नो खेलमा सेमीमा पराजित हुनु परेको पिडा बिर्सेका थिएनन् । आफुले नसकेको ठाँउमा नयाँ पिढि पुग्छ भन्ने मा विश्वस्त थिए । यस्तै घटनाक्रमबाट उनले संङ्खपार्क डोजोहल संचालन गरे । त्यो सँगै अहिले अनाथ बालबालिका हरुलाई समेट्दै सिफलमा बालमन्दीर डोजो हल संचालन गरेका छन् । सानुबाबुनै संखपार्क र बाल मन्दीर डोजो हलको प्रमुख प्रशिक्षक का रुपमा रहँदै आएका छन । संखपार्क डोजोहलमा करिव १७ ÷ १८ जना सिनियर लेवलका खेलाडी छन् । उनले उत्पादन र प्रशिक्षित गरेका केही खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा दख्खल राख्ने भएका छन् भने केही अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुगेर खेल खेलेका छन । बालमन्दीरमा करिव २२ जना अनाथ वालबालिका लाई दुई बर्षदेखी निशुल्क रुपमा प्रशिक्षण मात्र दिएका छैनन् । कुनै अभिभावकले आफ्नो सन्तानको लागी गर्नुपर्ने कार्य र दाहित्व जसरी निभाउँछ , त्यसरीनै अजय( सानुबाबु)ले आफ्नो क्षेत्रबाट हुने र पुग्ने सहयोग ति अनाथ बालबालिका लाई दिएका छन् । करातेको गुरु मात्र नभई एक अभिभावक बनेर उनीहरुको छाता बनेका छन् । उनीहरुलाई यस खेलमा आवश्यक पर्ने ड्रेस, बेल्टमात्र नभई हलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामाग्रीको जोहो अजयलेनै गरेका छन् । करिव २२ जना मध्ये ७ जना सनियर लेभलका खेलाडी छन् । उनीहरु पनी राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा भिड्ने बनाएका छन् भन्छन ‘अब छिट्टै यि भाईबहिनाहरु पनि देशको नाम चिनाउने र खेल क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने बाटोमा छन् । मलाई गर्व लाग्छ यि खेलाडी देख्दा उनको खेल प्रतिको मोह र मेहनत देख्दा,अहिले अभिभावक हामी भएका छौं। यिनीहरुको खेलले भोली देश र देशका नीती निर्मातालाई हाम्रा सन्तान हुन भन्ने बोध यिनै खेलाडीले गराउनेछन् ।’ सानुबाबुले आफ्नो गाउँ काभ्रेमा पनि डोजोहल संचालन गरेर आफ्नो गाँउ समेत खेलक्षेत्रबाट चिनाउने सोचमा थिए । तर देशका हेरक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्यहाँ डोजो हल संचालन गर्न सकेनन् ।
उनलाई सरकार र सम्बन्धीत निकायहरुसँग पनि गुनासो छ । भन्छन् ‘सरकारले करातेप्रति देखाएको उदासिनताले दुःख लाग्छ ,एउटा खेलाडी आफ्नो जीवन भर देशका लागी खेल्छ बल छउन्जेल त खेलेरै खान सक्ला तर जब बल सकिन्छ अनी उसको अवस्था सुन्य हुन्छ , आर्थिक सुन्य हुन थाल्छ । के त्यस्ता देशका लागी खेलेका खेलाडीहरुलाई सरकारले सम्मान गर्ने र उनीहरुलागी केही सोच्नु पर्ने होईन र ? जस्तो म एउटा खेल क्षेत्रहुँदै एसियन रेफ्रीको भुमिका सम्म पाएको छु । म मेरै बलबुत्ताले मेरा गुरुहरुको सहयोगले आजको दिन सम्म आएको छु । एउटा अन्तराष्ट्रिय रेफ्री(एसिएन)को लाइसेन्स करिब ४ बर्षमा रिनु गर्नुपर्छ त्यो समयमा विदेश जाँदा आउदा लगाएत करिव २ लाँख भन्दा बढि खर्च हुन्छ त्यस्तोमा स्वयम हामी आफैले म्यानेज गर्नुपर्ने स्थीती छ । हिजो देशको लागी खेलीयो आज देशको प्रतिनिधित्व गर्दै रेफ्रीको भुमिकाबाट चिनाउने काम गरेका छौं । यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सहयोग गर्नुपर्ने होईन र ? तेति मात्र होईन कराते महासंघ छ, राखेप छ,मन्त्रालय छ खेलक्षेत्रको लागी भन्दै विभिन्न पदमा विभिन्न व्यक्ति हुनुहुन्छ तर सम्बन्धीत निकायहरुमा कति कुन लेवलको रेफ्री देशमा छन् कुन, कति एसियन रेफ्री प्रशिक्षक छन् त्यसको विवरण र डाटा समेत हाम्रो सरकार र निकायले राख्न सकेको छैन् । के साच्चै खेलाडी प्रशिक्षकहरुलाई यसरी व्यवहार गर्दा खेल क्षेत्रको विकास होला ? के यस्तो व्यवहारले नयाँ पिढी यस क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहित होलान त ? जसरी प्रधानमन्त्री,मन्त्री, राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरुलाई घर वंगला र कारमा पछि सम्म सयर गराउन सक्ने तर त्यही देशको नाम चिनाउने खेलाडी प्रशिक्षकहरुलाई पेट पाल्न समेत अफठ्यारो स्थीती आउनु पर्ने यो अवस्था अत्यान्तै दुख लाग्दो भएन र ? यसबारे सरकार सम्बन्धीत पक्षले गम्भिरता पूर्वक लिने बिषय हो जस्तो मलाई लाग्छ ।’
कराते महासंघ छ महासंघ पनि हामीहरुले नै चलाएको संघ हो तर महासंघले पनि चाल्नु पर्ने कदमहरु चलेको पाईदैन खेलाडी , प्रशिक्षकको हक हितको लागी राज्य निकाय सँग यस्ता जायज माग राख्न हिचकिचाउनु भएन भन्ने हो । महासंघ पनि डोजो हल दर्ता गराउने र स्वीकृती दिने संस्था जस्तो मात्र नबनोस् अन्य देशका खेलाडी रेफ्रीलाई सरकारले ,प्राइभेट क्षेत्रमा रहेका संघ सस्थाले गरेको लगानी जस्तै नेपाल सरकार र विभिन्न निकायले गर्ने हो भने नेपाली खेलाडी पनि कम छैनन् । जस्तो उदाहरणका रुपमा भन्दा जापान एयरलाइन्सले त्यहाँका खेलाडीहहरुलाई अन्य देशमा खेल्न जादैछन् भने स्वयम एयरलाइन्सलेनै लाने लैजाने काममा निस्वार्थ रुपमा निशुल्क सहयोग गर्छ । त्यस्तै अन्य संस्थाले अन्य कुराहरुमा स्पोन्सर गर्छन । यसरी सहयोग गर्दा खेलाडीलाई समेत हौसला बढ्छ । हाम्रो मा त्यो अवस्था छैन । नेपाली खेलाडी घरमा बसेर चना खाँदै भिड्नु पर्छ । अन्य देशको लाई विभिन्न फ्यासेलिटी छ । कुनै देशमा एउटा सितोरीया प्रतियोगिता भयो भने स्वयम डोजो हलले आफ्नो खर्चमा बाहिर पठाउने र भिडाउने वाध्यता छ । त्यसमा सरकारको जिम्मेवारी होईन । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा सरकारको नाम उचो राख्ने होइन ? यस्ता यावत कुराहरु सरकारी पक्षबाट कमजोरीका रुपमा रहेका छन् । यता तिर ध्यान दिनुपर्छ ।’
सानुबाबुले राष्ट्रिय रेफ्रीको रुपमा रहँदा नेपाल र भारतमा भएका विभिन्न खेलमा रेफ्रीको भुमिका निभाएका थिए भने अन्तराष्ट्रिय रेफ्रीको भुमिका २०१७ श्रिलंकाबाट पाएका थिए । त्यहाँ उनले रेफ्रीको मापदण्ड पुरा गरी त्यसको लागी लिएको परीक्षा पास गरेर एकेएफ जज वीको भुमिका पाएका थिए । त्यही क्रममै सुरुवात श्रिलंकामा भएको एक प्रतियोगितामा एकेएफ रेफ्रीको भुमिका निर्वाह गरेका हुन । इन्डोनेसियाको वाङडोमा २०१७ डिसेम्बर १५ देखी १७ सम्म भएको प्रतियोगिता र २०१९मा थाइल्याण्डमा भएको कराते प्रतियोगिताको रेफ्रीको भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । यस्तै कार्य सँगै अनाथहरुको सहरा र छाता पनि बनेर अगाडी बढिरहेका छन् । उनी करातेमा आउने इच्छा भएका नयाँ पिढिलाई भन्छन् कराते खेल्दैमा बिग्रने र सप्रीने भन्ने होइन । कराते त एक व्यक्तिको लागी, आफ्नो आत्मरक्षाको लागी, सँगै स्वास्थ्यको लागी समेत फाइदाको कुरा हो । राम्रो खेल्न सके आफ्नो र देशको नाम उचो राख्न सकियो, विभिन्न कारणबाट निरन्तरता दिन सकिएन भने त्यो स्वास्थ्य सँगै आत्मरक्षाको लागी हुन्छ । हामी देख्छौ विहान विहान विभिन्न पार्कहरुमा योगा गरिरहेको, मानिस स्वस्थ्य रहन अनेकन उपाए अपनाइरहेको देख्छौं । कराते त्यस्तो खेल हो त्यसले योग गर्नुपर्ने बाध्यतानै हुँदैन । किनकी करातेमै योगाका सम्पूर्ण स्टेपहरु समाहित हुन्छन । त्यसैले कराते किन खेल्ने भन्ने प्रश्नमा म भन्छु ‘राम्रो खेले देश र आफ्नो नाम उचो राख्न,खेलाडी मार्फत देश चिनाउन,सकिएन भने आफ्नो स्वास्थ्य र आत्म रक्षाको लागी कराते आवश्यक छ ।